भ्लादिमिर इल्यिच लेनिनको संक्षिप्त जीवनी - Left Review Online
आज : २०७६ असार ६ गते शुक्रवार
भ्यादिमिर इल्यिच लेनिन बिसौँ शताब्दीको सबैभन्दा महान् घटनाको रुपमा रहेको महान् अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिको नेृत्वकर्ता हुनु हुन्थ्यो, जसले सम्पूर्ण मानवजातिको विकासक्रमलाई मौलिक रुपमा बदल्न सफल भयो ।
विश्वका महान् समाजवादी नेता भ्लादिमिर इल्यिच लेनिनको जन्म २२ अप्रिल, १८७० मा सिम्ब्रिस्क (उल्यानोभस्क) सहरमा भएको थियो । यो सहर रुसको प्रसिद्ध भोल्गा नदीको किनारमा पर्दछ । लेनिनका पिताको नाम इल्या निकोलायभिच उल्यानोभ हो भने माताको नाम मारिया अलेक्सान्द्रोभ्ना ब्लाङ्क हो ।
लेनिनका पिता इल्या निकोलायभिच उल्यानोभले कलिलै उमेरमा गरिबीको मार खप्नु परे पनि जेठो दाजुको सहायता, आफ्नै कठिन परिश्रम र असाधरण प्रतिभाको फलस्वरुप मात्र उहाँले उच्च शिक्षा हासिल गर्न सफल हुनुभयो । लेनिनको आमा एक डाक्टरकी छोरी हुनुहुन्थ्यो । उहाँले घरमै शिक्षा पाउनुभएको थियो । लेनिनका माता–पिता शिक्षित रुसी नागरिक हुनु हुन्थ्यो ।
भ्यादिमिर इल्यिच लेनिनको बाल्यावस्था एउटा ठूलो र असाधरण रुपले मिलनसार परिवारमा बितेको थियो । उहाँ केटाकेटी उमेरदेखि नै निकै साहसीे, प्रफुल्ल र ठट्यौलो मिजासको हुनु हुन्थ्यो । उहाँ पौडी खेल्न र स्केटिङ गर्न असाध्यै रुचाउनु हुन्थ्यो । उहाँ साथीहरुसँग मिलेर टाढा–टाढासम्म घुम्न जाने गर्नु हुन्थ्यो ।
पाँच वर्षकै उमेरमा इल्यिचले लेखपढ गर्न सिकिसक्नु भएको थियो । उहाँ एक असाधारण प्रतिभाशाली छात्र हुनुहुन्थ्यो । उहाँ आफ्नो कक्षामा सधैँ प्रथम हुनु हुन्थ्यो । स्कुले जीवनमा नै उहाँले समाजमा पाइने क्रान्तिकारी किताबतर्फ आफ्नो नजर दौडाउन पुग्नु भयो । लेनिनलाई बेलिन्सकी, गेर्चेन, चेर्निशेभस्की, दोब्रोल्युवोध र पिसारेभ जस्ता क्रान्तिकारी डेमोक्रेटहरुको किताब र उपन्यास ‘के गर्ने ?’ विशेष मन पर्दथ्यो । यसरी स्कुले जीवनमा नै लेनिनले किताबी र बाहिरी सामाजिक क्रान्तिकारी ज्ञान हासिल गरिसक्नु भएको थियो ।
युवा लेनिनको दृष्टिकोणमाथि उहाँको परिवार, वरिपरिको जीवन, प्रगतिशील रुसी साहित्यको निकै ठूलो प्रभाव पारेको थियो । त्यसताका रुसमा दु्रतगतिले पुँजीवादी व्यवस्थाको विकास हुँदै थियो । पुँजीवादी शोषणका साथसाथै सामन्ती उत्पीडन पनि कायम थियो र त्यो शोषणले सहरिया मजदुरहरु र गाँउले किसानहरुको जीवन असहनीय तुल्याएको थियो । जारशाहीको अत्याचार, जमिनदार र पुँजीपतिहरुको दमन, मजदुर र किसानहरुको पद्दलित अवस्थाले किशोर लेनिनको हृदयमा शोषकहरुप्रति घृणा र शोषितहरुप्रति सहानुभूति पैदा गरेको थियो । विश्वविद्यालय अध्ययनकै क्रममा युवा लेनिनले प्रगतिशील र क्रान्तिकारी दृष्टिकोण राख्ने विद्यार्थीहरुसँग सम्बन्ध कायम गर्नुभयो । डिसेम्बर १८८७ मा विद्यार्थीहरुको क्रान्तिकारी सभामा सक्रिय भाग लिए बापत उहाँ विश्वविद्यालयबाट निष्कासित हुनु भयो र पछि उहाँ गिरफ्तार हुनुभयो । यसरी उहाँको क्रान्तिकारी जीवन सुरु भयो ।
युवाकालमै लेनिनले मार्क्सवादको गम्भीर अध्ययन सुरु गर्नु भयो । युवा लेनिन मार्क्सवादलाई त्यो वैचारिक हतियार ठान्नुहुन्थ्यो जसद्धारा रुसी सर्वहाराले आफ्नो स्वतन्त्रता हासिल गर्न सक्दछ र रुसमा समाजवादीे व्यवस्था कायम गर्न सक्नेछ । उहाँले माक्र्सको प्रमुख कृति ‘‘पुँजी”को गम्भीर अध्ययन गर्नुभयो । त्यसपछि लेनिन पक्का मार्क्सवादी बन्नु भयो र वैज्ञानिक समाजवादका महान् विचारधाराको जोरदार प्रचार गर्न थाल्नुभयो ।
गुबेर्नियामा साढे चार वर्षको बसाईमा लेनिनले मार्क्स र एङ्गेल्सका कृतिहरुको कठोर अध्ययन जारी राख्नु भयो, विदेशी भाषाहरु, विशेषतः जर्मन भाषाको गम्भीर अध्ययन गर्नुभयो । यसै समयमा उहाँले जर्मन भाषाबाट रुसी भाषामा मार्क्स र एङ्गेल्सको एक महत्त्वपूर्ण कृति ‘‘कम्युनिस्ट घोषणापत्र”को अनुवाद गर्नुभयो । सन् १८९२ मा लेनिनले सामरामा पहिलो माक्र्सवादी अध्ययन मण्डली खोल्नु भयो । मण्डलीका सदस्यहरु मार्क्स र एङ्गेल्सका कृतिहरु पढ्थे र सक्रिय रुपमा मार्क्सवादको प्रचार गर्थे ।
क. लेनिन, अाफ्ना सहयाेद्धा क. स्टालिनका साथमा
मार्क्सवादी लेनिन १८९३ अगस्तमा पिटर्सवर्ग (त्यस ताकाको रुसको राजधानी) आउनु भएपछि आफूलाई पूर्णरुपमा रुसको क्रान्तिकारी सर्वहारा नेतामा परिणत गर्नुभयो । लेनिन ठूलो स्फूर्ति र अभिलाषासहित क्रान्तिकारी कार्यमा लाग्नु भयो । मार्क्सवादको गम्भीर अध्ययन, रुसी परिस्थितिमा माक्र्सवादी विचारधारा कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान, मजदुर संघर्षका अजेयताप्रति दृढ विश्वास र महान् संगठनात्मक प्रतिभाका कारणले गर्दा लेनिन छिट्टै पिटर्सवर्गमा मार्क्सवादीहरुको वरिष्ठ नेता बन्ने स्थिति भयो ।
मार्क्सवादी विचारधाराको बिस्तार र मजदुर पार्टीको निर्माणमा उदारवादी नारोद्निकहरु मुख्य बाधाको रुपमा देखिए । पिटर्सवर्गमा लेनिनले उदारवादी नारोद्निकहरुको विरुद्ध आफ्नो संघर्ष जारी राख्नु भयो । नारोद्निकहरुले आफूलाई ‘जनताका मित्र’ र मार्क्सवादीहरुलाई ‘जनताको सत्रु’ भनेको बेलामा लेनिनले ‘‘जनताका मित्र” को हुन् र उनीहरु कसरी सामाजिक जनवादीहरुको विरुद्ध संघर्ष गर्दैछन् ? भन्ने पुस्तक निकाल्नु भयो र मार्क्सवादीहरुको रक्षा गर्नुभयो । लेनिनको यो पुस्तक तत्कालीन रुसमा अत्यन्तै लोकप्रिय बन्न पुग्यो ।
लेनिनले एक क्रान्तिकारी मार्क्सवादी पार्टीको निर्माणमा आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाउनु भयो र रुसमा लेनिनको नेतृत्वमा मार्क्सवादी पार्टीको स्थापना भयो । लेनिनको ठूलो निपूर्णताकासाथ सर्वहारा पार्टीका लागि संगठनकर्ताहरु र क्रान्तिकारी मजदुर कार्यकर्ताहरु तयार गर्दै जानु भयो ।
मजदुरहरु लेनिनलार्इ धेरै माया गर्दथे । उनीहरु उहाँलाई आफ्नो नजिकको सहृदयी र दयालु मित्र ठान्दथे । लेनिनको भाषण र लेखहरु रुसी सर्वहारा जनतामाझ प्रिय हुँदै जान थाले । लेनिनले लेख्नु भएका पुस्तक र पर्चाहरु अशिक्षित व्यक्तिहरुका लागि समेत सुगम हुन्थे । यी पुस्तकहरुमा मजदुरहरुको पद्दलित अवस्था र पुँजीजीवीहरुद्वारा उनीहरुमाथि गरिने वर्वरतापूर्ण शोषणको चित्रण गरिएको हुन्थ्यो । मजदुर वर्गको स्वतन्त्रताका लागि संघर्षका बाटोहरु देखाएका हुन्थे ।
सन् १८९५ को वसन्तमा पिटर्सवर्गका मार्क्सवादीहरुको अनुरोधमा ‘श्रम मुक्ति’ दलसँग सम्बन्ध कायम गर्न र पश्चिम युरोपेली मजदुर आन्दोलनको अध्ययन गर्न लेनिन विदेश जानुभयो । लेनिन स्विजरल्याण्ड हुँदै पेरिस र बर्लिन जानु भयो । स्विजरल्याण्डमा लेनिन ‘श्रम मुक्ति’ संगठनका नेताहरुसँग भेट गर्नुभयो भने पेरिस र बर्लिनमा रहँदा लेनिन फ्रान्सेली र जर्मनी मजदुरहरुका सभाहरुमा सामेल हुनु भयो, उनीहरुको रहन–सहन र जीवन पद्धतिको अध्ययन गर्नु भयो । उहाँले विदेशमा रहँदा पनि मार्क्सवादी दर्शनको विकासमा आफ्नो समय लगाउनु भयो ।
सेप्टेम्बर १८९५ को सुरुमा लेनिन पिटर्सवर्ग फर्कनु भयो । उहाँ अझ धेरै उत्साहपूर्वक क्रान्तिकारी काममा लाग्नु भयो । उहाँ अक्सर आमसभाहरुको आयोजना गर्नुहुन्थ्यो र मजदुरहरुसँग कुराकानी गर्नुहुन्थ्यो । यसै समयमा लेनिनले ‘मुक्ति संघ’को स्थापना गर्नुभयो । ‘मुक्ति संघ’ रुसको क्रान्तिकारी मार्क्सवादी पार्टीको पहिलो बिउ थियो । बिस्तृत मजदुर आन्दोलन नै संघको कार्य क्षेत्र थियो र सर्वहारावर्गको संघर्षको नेतृत्व गथ्र्यो ।
‘मुक्ति संघ’ले रुसमा पहिलो पटक मजदुर आन्दोलनमा वैज्ञानिक समाजवाद प्रयोग गर्न थाल्यो । यसै कुरामा संघको महान् ऐतिहासिक भूमिका निहित थियो । ‘मुक्ति संघ’को नेतृत्वमा सन् १८९६ को गृष्ममा पिटर्सवर्गमा कपडा कारखानाहरुका मजदुरहरुको चर्चित हड्ताल भयो । ‘मुक्ति संघ’को क्रियाकलापमाथि कडा निगरानी राख्दै आएको जारशाही सरकारले छिट्टै संघमाथि कडा प्रहार गर्याे । डिसेम्बर १८९५ को सुरुमा लेनिनसहित संघका बहुसंख्यक कार्यकर्ताहरु गिरफ्तार भए । जेलमै लेनिनले प्रख्यात कृति ‘रुसमा पुँजीवादको विकास’ लेख्न सुरु गर्नु भयो ।
लेनिनको जीवन–साथीको नाम नादेज्दा (नाद्या) क्रुप्सकाया हो । क्रुप्सकाया लेनिनकी श्रीमती मात्र नभएर एक असल राजनीतिक साथी पनि हुनुहुन्थ्यो । क्रुप्सकाया लेनिनको मृत्युपर्यन्त उहाँको निकटतम् मित्र, सहयात्री र सहयोगी रहनु भयो ।
सन् १९०० तिर लेनिनको तत्परता र उहाँको नेतृत्वमा सम्पूर्ण रुसभर ‘इस्क्रा’ को प्रकाशन सुरु गरी त्यसका सहयोगी र बिक्री गर्ने व्यक्तिहरुको पूरा जाल नै विछ्याइयो । लेनिन अखबारको मुटु हुनु हुन्थ्यो ।
सन् १९०१ देखि भ्लादिमिर इल्यिचले आफ्ना केही लेखहरु लेनिन नामबाट छपाउन थाल्नु भयो । सन् १९०२ मा लेनिनको कृति ‘के गर्न?’ प्रकाशित भयो । त्यसपछि उहाँ पार्टी निमार्णमा खट्नु भयो ।
बोल्सेविक पार्टीको निर्माण भएपछि त्यो अजेय शक्ति देखा पर्यो, जसले जमिन्दार र पुँजीपतिहरुको सत्ता ढाल्न, समाजवादको निमार्ण गर्न रुसी मजदुर वर्ग र समस्त श्रमिकहरुलाई ब्युझाउँदै थियो । लेनिन र उहाँका सहयोगीहरुद्वारा गठित बोल्सेविक पार्टी विश्वका समस्त कम्युनिस्ट तथा मजदुर पार्टीहरुका लागि एउटा नमूना बन्न पुग्यो ।
लेनिनले सन् १९०४ मा ‘एक पाइला अगाडि, दुई पाइला पछाडि’ भन्ने पुस्तक प्रकाशित गर्नु भयो । त्यस पुस्तकमा लेनिनले मजदुर आन्दोलनको मेरुदण्ड बनेको पार्टीको विरुद्ध मेन्सेविकहरु संघर्ष गर्दैछन्, पार्टीलाई नष्ट–भ्रष्ट गर्न चाहन्छन् भन्ने कुरालाई प्रष्टसँग उल्लेख गर्नु भएको थियो ।
सन् १९०५ को शरदमा रुसी क्रान्तिकारी आन्दोलनले विशाल रुप लिन थाल्यो । अक्टोबर महिनामा आम राजनीतिक हड्ताल सुरु भयो । कलकारखानाहरु, हुलकाहरु र टेलिग्राफ अड्डाहरु बन्द भए । पूरा राष्ट्रकै जीवन–स्पन्दन रोकिएसरी संघर्ष अगाडि बढ्यो । यो सर्वहारा संघर्षको त्यो नयाँ रुप थियो, जुन त्यस बेलासम्म अरु कुनै राष्ट्रमा भएको थिएन ।
नोभेम्बर १९०५ को सुरुमा लेनिन पिटर्सवर्ग आइपुग्नु भयो र देशभित्र नै बसेर पार्टी र क्रान्तिकारी संघर्षको नेतृत्व गर्न थाल्नु भयो । उहाँले ‘नोभाया जीज्न’ भन्ने पत्रिकामा आफ्नो लेखहरुद्वारा पार्टीका कार्यकर्ता र जनतालाई प्रशिक्षित गर्नुभयो । यस अखबारमा निस्केका लेनिनका लेखहरुमध्ये ‘‘पार्टी संगठन र पार्टी साहित्य” लेखको विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान छ ।
जारशाही लेनिनको क्षमतादेखि तर्सन थाले । लेनिन र लेनिनको नेतृत्वमा भएको सर्वहारा मजदुर आन्दोलनलाई दबाउन जारशाही क्रियाशील भयो तर सफल हुन सकेन । लेनिन रुसका जनतामाझ झन् धेरै लोकप्रिय हुन थाल्नुभयो र लेनिनले लिनु भएको नीति रुसका जनताको कार्यनीति बन्न पुग्यो । लेनिन रुसका सर्वहारा वर्गको निम्ति आस्थाको पुञ्ज बन्न सफल हुनु भयो ।
विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका महान् नेता लेनिनले बोल्सेविक नीतिको औचित्य प्रमाणित गर्न अथक परिश्रम गर्नुभयो । उहाँ मजदुर, बुद्धिजीवी, कामदार र विद्यार्थीहरुसँग वार्तालाप गर्ने कुनै पनि मौका छोड्नु हुन्थ्यो । ९ मे १९०६ मा उहाँले पिटर्सवर्गमा ३ हजार जनताको उपस्थितिमा महत्त्वपूर्ण सभामा भाषण गर्नुभयो । उक्त भाषणमा लेनिनले निरङ्कुश शासनसँग कादेतहरुको बुर्जुवा पार्टीले गरेको साँठगाठको भण्डाफोर गर्नुभयो र सर्वहाराको क्रान्तिकारी नीति अगाडि सार्नु भयो ।
लेनिनले कठोर सङ्घर्षपछि पार्टी संगठनलाई बोल्सेविकहरुको वरिपरि गोलबन्द गर्न सफल हुनुभयो । त्यसपछि उहाँले पार्टीको पाँचौ महाधिवेशनका लागि गम्भीर तयारी गर्न सुरु गर्नुभयो । फेब्रुअरी १९०७ मा लेनिनले रसियाली सामाजिक–जनवादी मजदुर पार्टीको पाँचौ महाधिवेशनमा भाग लिन लेनिन लण्डन जानु भयो र लेनिनले महाधिवेशनको नेतृत्व गर्नुभयो । महाधिवेशनमा लेनिनद्वारा प्रस्तुत बुर्जुवा पार्टीहरुप्रतिको दृष्टिकोण सम्बन्धी प्रस्ताव पारित भयो ।
पाँचौ महाधिवेशनले क्रान्तिमा बोल्सेविकहरुले अपनाएको नीतिको औचित्य स्वीकार गर्यो । अन्य प्रश्नहरुमा पनि बोल्सेविकहरुले मेन्सेविकहरुमाथि विजय हासिल गरे । महाधिवेशनका मजदुर प्रतिनिधिहरुसँग लेनिन ठूलो सद्भावना र सहृदयतापूर्वक वार्तालाप गर्नुहुन्थ्यो । पाँचौ महाधिवेशनले लेनिनलाई रसियाली सामाजिक जनवादी मजदुर पार्टीको केन्द्रीय समितिको सदस्य छान्यो ।
जुन १९०७ को सुरुमा लेनिन लण्डनबाट रुस फर्किनुभयो । फिनल्याण्डमा बसोबास गर्न थाल्नु भयो । महाधिवेशनको लगत्तै जारशाही सरकारले दमनको नीति लियो र दमन गर्न सुरु गर्यो । रुसमा कठोरतम् प्रतिक्रियावादी काल सुरु भयो । जनवरी १९०८ मा लेनिन स्विजरल्याण्डको जेनेभा सहरमा फर्कनु भयो ।
परन्तु लेनिनको सम्पूर्ण ध्यान रुसी क्रान्तिप्रति निर्दिष्ट थियो । लेनिन नयाँ जोश र शक्ति बटुलेर पार्टी कार्यमा लाग्नु भयो, नयाँ क्रान्तिको तयारी गर्न थाल्नु भयो । नयाँ क्रान्तिको विकास सम्बन्धी लेनिनको भविष्यवाणी छिटै साकार भयो । व्यापक क्रान्तिकारी संघर्षको यस अदम्य विकासलाई कुनै अत्याचार र उत्पीडनले रोक्न सकेन ।
सन् १९१० मा रुसमा फेरी मजदुर आन्दोलन चर्किन थाल्यो । पिटर्सवर्ग, मस्को र अरु ठूला–ठूला सहरहरुमा गृष्म र शरदमा हड्ताल, प्रदर्शन, सभा र अन्य राजनीतिक सक्रियताहरु बढ्न थाले । क्रान्तिकारी आन्दोलन चर्कंदै गयो । ठूला कठिनाइहरु पार गदै बोल्सेविकहरुले डिसेम्बर १९१० मा पिटर्सवर्गमा साप्ताहिक पत्रिका ‘‘जभेज्दा’’ निकाले । अन्ततः क्रान्ति अगाडि बढ्न सफल भयो ।
लेनिन समाजवादी क्रान्ति नजिक आउँदैछ भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा देख्दै हुनहुुन्थ्यो र पार्टीलाई यस क्रान्तिका लागि तयार गर्दै हुनुन्थ्यो । ‘‘राज्य र क्रान्ति’’ पुस्तकमा लेनिनको समाजवाद र साम्यवादलाई साम्यवादी समाजको विकासका दुई खुड्किलाहरुको रुपमा हेर्नु भएको थियो । मार्क्स र एङ्गेल्सको विचारधारालाई विकसित तुल्याउदै उहाँले समाजवादले अनिवार्य साम्यवादमा संक्रमण गर्नेछ भन्ने कुरा देखाउनु भएको थियो । सन् १९१७ मा महान अक्टोबर समाजवादी क्रान्ति सफल भयो ।
६ मार्च १९१८ मा प्रेट्रोग्रादमा सातौं पार्टी महाधिवेशन सुरु भयो । यो महान् अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिको विजयपछि पहिलो महाधिवेशन थियो । लेनिनले महाधिवेशनको सम्पूर्ण कार्यको नेतृत्व गर्नु भएको थियो । उहाँले त्यसमा १८ पटक भाषण गर्नुभएको थियो । सातौं पार्टी महाधिवेशनले बहुमतद्वारा लेनिनवादी नीतिको समर्थन गर्यो । ‘‘युद्ध तथा शान्ति सम्बन्धी प्रस्ताव’’ पारित गर्यो । लेनिनको प्रस्ताव अनुसार पार्टीको नाम बदल्ने निर्णय भयो । यस महाधिवेशनदेखि पार्टीको नाम रसियाली कम्युनिस्ट (बोल्सेविक) पार्टी रहन गयो ।
११ मार्च १९१८ मा सोभियत सरकार मस्को सर्यो र मस्को सोभियत राष्ट्रको राजधानी बन्यो । जन कमिसार परिषद् र अखिल रसियाली केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका कार्यालयहरु क्रेमलिन भवनमा सरे । लेनिन पनि क्रेमलिन सर्नु भयो ।
भ्यादिमिर इल्यिच लेनिन कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एङ्गेल्सका विचार, कार्य तथा शिक्षाका महान् अनुयायी हुनुहुन्थ्यो । उहाँले आफ्नो रुसी भूमिमा समाजवादको प्रयोग गरेर सफल पनि हुनुभयो । विश्व सर्वहारा वर्गका महान् नेता लेनिनले मार्क्सवादका तिनै संघटक अंगहरु दर्शनशास्त्र, राजनीतिक अर्थशास्त्र र वैज्ञानिक समाजवादलाई विकसित तुल्याउनु भयो ।
समाजवादी क्रान्तिको तयारी र पूर्णताको समयमा होस् वा समाजवादको निर्माणका लागि संघर्षको समयमा, क. लेनिन पार्टीको प्रतिभाशाली नेतृत्वकर्ता हुनु हुन्थ्यो । भ्यादिमिर इल्यिच लेनिन बिसौँ शताब्दीको सबैभन्दा महान् घटनाको रुपमा रहेको महान् अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिको नेृत्वकर्ता हुनु हुन्थ्यो, जसले सम्पूर्ण मानवजातिको विकासक्रमलाई मौलिक रुपमा बदल्न सफल भयो । लेनिनले सोभियत राष्ट्रमा समाजवादको निर्माण गर्न योजना तयार पार्नु भएको थियो । यो उहाँको अर्को महान् देन थियो ।
विश्वको पहिलो समाजवादी राष्ट्रका संस्थापक र महान् मार्क्सवादी चिन्तक क. लेनिन आज हाम्रो माझ हुनुहुन्न । उहाँको २१ जनवरी १९२४ मा मृत्यु भयो । तथापि उहाँको कर्म र महान् विचार युगौँयुगसम्म यो संसारमा रहिरहने छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस्ः कार्ल मार्क्सको संक्षिप्त जीवनी
याे पनि पढ्नुहाेस्ः फ्रेडरिक एङ्गेल्सः जीवनी र कृतित्त्व
याे पनि पढ्नुहाेस्ः महान् अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिबारे केही कुरा
याे पनि पढ्नुहाेस्ः लेनिन हराएकाे खबर (कविता) – क. बलराम तिमल्सिना
पछिल्लाे - देशका सम्पूर्ण कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुलाई एकता र ध्रुवीकरणका लागि माअाेवादी केन्द्रकाे अपिल
अघिल्लाे - लेनिन हराएको खबर
सञ्चार माध्यमका साथीहरुले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको १८औं राष्ट्रिय महाधिवेसनको व्यापक सम्प्रेषण गरी चीनमा व्यक्त भएका अनेकौं...
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व शिक्षामन्त्री क.धनीराम (डिआर) पौडेलप्रति श्रद्धाञ्जली...
कम्युनिस्ट एकतापछिका संशय
विद्वान दार्शनिक सुकरातसँग सम्बन्धित एउटा प्रसङ्ग छ । एउटी निकै सुन्दरी युवती हुन्छिन्। युवतीले सुकरातसँग प्रस्ताव...
इरानी राजदूतद्वारा अध्यक्ष प्रचण्डसँग शिष्टाचार भेट
काठमाडौँ । नेपालका लागि इरानका राजदूत डा. अलि चेगेनीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष प्रचण्डसँग...
महान् दार्शनिक संसारमा हजारौं विचार छन् । ती विचार अघि सार्ने कैयन दार्शनिकहरु जन्मिए र अमर...
काठमाडौं, मधेशमा क्रियाशील मधेश तराई फोरम पार्टी मंगलबार नेकपामा समाहित भएको छ। नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले उक्त पार्टीलाई...